Liverpool Oo Go,aan Ka Gaartay In Ay January La Soo Wareegto Naby Keita Xilli Kooxda Leipzing Diyaar U Tahay In Ay Xiddiga Fasaxdo – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Liverpool Oo Go,aan Ka Gaartay In Ay January La Soo Wareegto Naby Keita Xilli Kooxda Leipzing Diyaar U Tahay In Ay Xiddiga Fasaxdo
Liverpool Oo Go,aan Ka Gaartay In Ay January La Soo Wareegto Naby Keita Xilli Kooxda Leipzing Diyaar U Tahay In Ay Xiddiga Fasaxdo
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay go,aan ka gaartay in ay wakhti hore soo qaadato xiddiga Naby Keita iyo in ay sugto ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan wakhtigaas oo uu xiddigu si Rasmi ah u noqon doono xiddig Liverpool ah.
Liverpool ayaa diyaar u ah inay isticmaasho qaar ka mid ah lacagtii 145 milyan ee ay ka heshay iibka Philippe Coutinho kuna soo qaadato Naby Keita inta lagu jiro bishan halkii ay sugi lahayd ilaa xagaaga.
Reds ayaa wakhti hore oo xagaagii la soo dhaafay ah xiddiga ku guulaystay saxiixiisa iyaga oo ka bixiyay 55 milyan oo euro laakiin heshiiska ayuu ku jiray in uu xiddigu amaah ku qaato kooxda RB Leipzin xilli ciyaareedkan.
Si kasta ha ahaatee Klopp ayaa doonaya in uu Keita keeno Liverpool haatan iyada oo lagu soo waramaya in ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan lacagta ay kooxda reer Germany dalbanayso.
22 jirkan ayaa la fahamsan yhaay in uu doonayo in uu horay ugu soo biiro kooxda Liverpool halkii uu ilaa xagaaga sugi lahaa.
Laakiin kooxda Leipzing ayaa qiimo u xadidaday kooxda Liverpool hadii ay doonayaan in ay xiddiga helaan inta lagu guda jiro suuqa January.
Warka ay haatan qorayso wargayska The Sun ayaa sheegaya in ay Liverpool diyaar u tahay in ay bixiso lacagta ay kooxda Leipzing dalbanayso si ay xiddiga u keento suuqa January.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in uu xiddigu maanta uuna qaadan tababarka kooxda Leipzing isaga oo isku diyaarinaya in uu u guuro magaalada Liveprool.